ဒီနေ့ပဲ ရဲတွေကို စစ်တိုက်ခိုင်းမယ့် ဥပဒေ ထုတ်လိုက်ပြီ – Alanzayar
ဒီနေ့ပဲ ရဲတွေကို စစ်တိုက်ခိုင်းမယ့် ဥပဒေ ထုတ်လိုက်ပြီ
မင်းအောင်လှိုင်က ဒီနေ့ပဲ ရဲတွေကို စစ်တိုက်ခိုင်းမယ့် ဥပဒေ ထုတ်လိုက်ပြီ။ လပ်တီးက အထွက်ပဲရှိတော့တယ်။ အဝင်မရှိတော့ဘူး။ ဥာဏ်ကောင်းသူတွေ အရှင်ထွက်ပြီး ဥာဏ်နည်းသူတွေ အသေထွက်တယ်။ DSAတောင် လျှောက်လွှာတင်မယ့်သူ မရှိဘူး။
ဘယ်လောက် တပ်ပျက်လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ကယားက ကိုယ်ထောက်ပို့နေကျအဖွဲ့က စစ်ခွေးအရှင်မိတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဲ့ဘဲက စစ်သားမဟုတ်ဘူး။ စစ်ကြောင်းမှာ လူမရှိလို့ ညနေပြန်ရမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ချလာတဲ့ ဗိုလ်ကြီးညီတဲ့။ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ငိုလိုက်တာဆိုတာ။
ရှေ့တန်းဆိုပြီး ခြေကျင်လွှတ်လိုက်ရင် လမ်းမှာတင် ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာနဲ့ တစ်စိတ်ကုန်တယ်။ နောက်တစ်စိတ်က တိုက်ရင်းမာလကတယ်။ တစ်ဝက်လောက်က ထွက်ပြေးရသလိုနဲ့ တပ်ကပါ ပြေးတယ်။
အခု ရဲတွေကို စစ်တိုက်ခိုင်းတော့မယ်။ ကျည်အစစ်တောင် တော်ရုံပေးမကိုင်ခဲ့တဲ့ ရဲတွေကို အခုမှ ရှေ့တန်းထိုးထည့်နေတယ်။ ကြည့်နေ…. ဒွမ်ကြဦးမှာ အတုံးအရုန်း။
ရဲတွေပြီးရင် မီးသတ်ပဲ။ ပြည်ထဲရေးအောက်က ဘဲတွေကုန်ရင် Nonတွေပါ ထည့်လိမ့်မယ်။
နေပြည်တော်တစ်နေရာတည်းကျန်ရင်တောင် အာဏာရူးရပ်မှာမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေ။ အကုန်တွဲခေါ်သွားမှာ။ ကြိုပြင်ထားကြ Non တို့ရေ
ဒီနပေဲ့ ရဲတှကေို စဈတိုကျခိုငျးမယျ့ ဥပဒေ ထုတျလိုကျပွီ။
မငျးအောငျလှိုငျက ဒီနပေဲ့ ရဲတှကေို စဈတိုကျခိုငျးမယျ့ ဥပဒေ ထုတျလိုကျပွီ။ လပျတီးက အထှကျပဲရှိတော့တယျ။ အဝငျမရှိတော့ဘူး။ ဉာဏျကောငျးသူတှေ အရှငျထှကျပွီး ဉာဏျနညျးသူတှေ အသထှေကျတယျ။ DSAတောငျ လြှောကျလှာတငျမယျ့သူ မရှိဘူး။
ဘယျလောကျ တပျပကျြလဲဆိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပတျလောကျက ကယားက ကိုယျထောကျပို့နကေအြဖှဲ့က စဈခှေးအရှငျမိတယျ။ စဈဆေးတဲ့အခါ အဲ့ဘဲက စဈသားမဟုတျဘူး။ စဈကွောငျးမှာ လူမရှိလို့ ညနပွေနျရမယျဆိုပွီး ချေါခလြာတဲ့ ဗိုလျကွီးညီတဲ့။ ဗီဒီယိုဖိုငျထဲမှာ ငိုလိုကျတာဆိုတာ။
ရှတေ့နျးဆိုပွီး ခွကေငျြလှတျလိုကျရငျ လမျးမှာတငျ ဝဝေဆောဆာ ပဒသောနဲ့ တဈစိတျကုနျတယျ။ နောကျတဈစိတျက တိုကျရငျးမာလကတယျ။ တဈဝကျလောကျက ထှကျပွေးရသလိုနဲ့ တပျကပါ ပွေးတယျ။
အခု ရဲတှကေို စဈတိုကျခိုငျးတော့မယျ။ ကညျြအစဈတောငျ တျောရုံပေးမကိုငျခဲ့တဲ့ ရဲတှကေို အခုမှ ရှတေ့နျးထိုးထညျ့နတေယျ။ ကွညျ့နေ…. ဒှမျကွဦးမှာ အတုံးအရုနျး။
ရဲတှပွေီးရငျ မီးသတျပဲ။ ပွညျထဲရေးအောကျက ဘဲတှကေုနျရငျ Nonတှပေါ ထညျ့လိမျ့မယျ။
နပွေညျတျောတဈနရောတညျးကနျြရငျတောငျ အာဏာရူးရပျမှာမဟုတျတဲ့ကောငျတှေ။ အကုနျတှဲချေါသှားမှာ။ ကွိုပွငျထားကွ Non တို့ရေ
Previous Article ရန်ကုန်က နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်နဲ့ ကျန်တဲ့ရွှေဆိုင်အကုန်လုံး တကယ်နားကားပြီ
Next Article အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သင်ထင်မထားတဲ့ အပြုအမှုများ